शीर्षकमा बाइबल पदहरू: धन्यको -> भगवान
अरूलाई देओ अनि परमेश्‍वरले पनि तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। उहाँले त खाँदीखाँदी झुसी पारेर दिनुहुनेछ। जुन नापले तिमीहरू अरूहरूलाई दिन्‍छौ, त्‍यही नापले तिमीहरूले पनि पाउनेछौ।”
शोक गर्नेहरू कति धन्‍य हुन्! किनभने परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई मनमा शान्‍ति दिनुहुनेछ।
परमेश्‍वरले हामीलाई आशिष् दिनुभएको छ, सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूले उहाँलाई आदर गरून्।
 “परमप्रभुले तिमीलाई आशिष् देऊन् र तिम्रो रक्षा गरून्, परमप्रभु तिमीमाथि दयालु र कृपालु रहून्।
 केही कुरामा पनि फिक्री नगर। तर तिमीहरूलाई खाँचो परेको कुरा प्रार्थनामा परमेश्‍वरलाई भन अनि धन्‍यवाद दिंदै बिन्‍ती चढाओ। परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।
उहाँको भरिपूर्णताबाट हामी सबैले धेरैभन्दा धेरै अनुग्रह पाइरहेका छौं
 “म आफ्‍नै नाममा शपथ खाँदछु। परमप्रभु भन्‍दै हुनुहुन्‍छ, म तँलाई धेरै आशिष् दिनेछु। तैँले यो काम गरिस् कि तेरो एउटै छोरालाई पनि मबाट रोकी आफैंसँग राख्‍न खोजिनस् यसर्थ म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि आकाशमा भएका ताराहरू वा समुद्रका किनारमा भएका बालुवासरह गरी म तँलाई सन्‍तान दिनेछु। तेरा सन्‍तानले आफ्‍ना बैरीहरूलाई जित्‍नेछन्।
 परमेश्‍वरले आकाशबाट शीत दिऊन् र तेरो खेतबारी मलिलो बनाइदेऊन्। उहाँले तँलाई प्रशस्‍त अन्‍न र दाखमद्य देऊन्, जाति-जातिका मानिसहरू तेरा दास होऊन् र तिनीहरूले तँलाई दण्‍डवत् गरून्। तैँले आफ्‍ना सारा कुटुम्‍बमाथि राज्य गरेस् र तेरी आमाका सन्‍तानले तेरा सामु दण्‍डवत् गरून्। तँलाई सराप दिनेहरूले सराप पाऊन् र तँलाई आशिष् दिनेहरूले आशिष् पाऊन्।”
 त्यो मानिस सुखी रहन्‍छ, जो दुष्‍ट मानिसको सल्‍लाह मान्‍दैन, पापीहरूको चालमा चल्‍दैन वा परमेश्‍वर नमान्‍नेहरूको साथ दिँदैन। तर परमप्रभुको व्‍यवस्‍था मान्‍नलाई खुसी हुन्‍छ र रात-दिन त्‍यसको अध्‍ययन गर्छ, त्यो खोलाका छेउमा उम्रेको ठीक समयमा आफ्‍नो फल दिने र पात पनि नओइलिने रूखजस्‍तो हुन्‍छ। त्यसले जुन कुरामा हात लाउँछ, त्‍यसमा सफल हुन्‍छ।
 परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्‍छ, मलाई चाहिएका सबै थोक म पाउँछु। उहाँले मलाई हरियो घाँसको चउरमा लेटाउनुहुन्‍छ र ताजा पानीले भरेको शान्‍त पोखरीमा उहाँले मलाई लैजानुहुन्‍छ। उहाँले मलाई नयाँ बल दिनुहुन्‍छ, आफ्‍नो प्रतिज्ञाअनुसार उहाँले मलाई ठीक बाटोमा डोर्‍याउनुहुन्‍छ। घोर अन्‍धकारका बीचबाट भएर जानुपरे पनि हे परमप्रभु! म डराउनेछैनँ किनभने तपाईं मेरो साथ हुनुहुन्‍छ, तपाईंको गोठालाका छडी र लाठोले मेरो रक्षा गर्छन्।
२ शमूएल २२:३-४
 मेरा परमेश्‍वर मेरो सुरक्षा हुनुहुन्‍छ, उहाँसँग हुँदा म सुरक्षित छु। ढालले झैँ उहाँले मलाई रक्षा गर्नुहुन्‍छ, उहाँले मलाई आक्रमणबाट सकुशल राख्‍नुहुन्‍छ। उहाँले मेरो उद्धार गर्नुहुन्‍छ; उहाँले मेरो रक्षा गर्नुहुन्‍छ र मलाई हिंसाबाट बचाउनुहुन्‍छ। म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट बचाउनुहुन्‍छ। परमप्रभुको प्रशंसा होस्!
१ यूहन्ना 5:18
परमेश्‍वरको बालकले पाप गरिरहँदैन किनभने परमेश्‍वरका पुत्रले उसलाई जोगाउनुहुन्‍छ र शैतानले उसलाई हानि गर्न सक्‍दैन। यो हामीलाई थाहै छ।
कष्‍टले मलाई घेरिराखेको बेलामा तपाईंले मलाई कुशल राख्‍नुहुन्‍छ, तपाईंले मेरा रिसाएका शत्रुहरूको विरोध गर्नुहुन्‍छ र आफ्‍नो शक्तिले मलाई बचाउनुहुन्‍छ।
परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई प्रशस्‍त हुने गरी पूरै दिन सक्‍नुहुन्‍छ र चाहिएको भन्दा पनि बढी नै दिनुहुनेछ। तिमीहरूलाई कुनै कुराको पनि कहिले खाँचो पर्नेछैन र प्रशस्‍त भलाइकै काम गर्न सक्‍नेछौ।
परमेश्‍वरको शान्‍ति कसैले बुझ्‍नै नसक्‍ने छ। यही शान्‍तिले तिमीहरूको हृदय र मनलाई ख्रीष्‍ट येशूमा जोगाएर राख्‍नेछ।
२ शमूएल ২২:৩-৪
१ यूहन्ना ৫:১৮
२ कोरिन्थी ৯:৮